Imidlalo-Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sabelane apha kwibhlog iindaba zokubuya kwamaGorha aMandla kunye noMlingo II, kuba iprojekthi ibi ...
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Ascii Patrol. Ngumdlalo owenziwe ngabalinganiswa be-ASCII abaphefumlelwe yi-Patrol yeNyanga.
IiHighes zasimahla zoMandla kunye noMlingo II ziya ebomini
Le projekthi ibikhona kangangexesha elithile njengemveliso evulekileyo, nangona kunjalo umsebenzi uyekisiwe kwaye kude kwaba ...
ISuperTuxKart 1.2 ilapha kwaye zezi ziindaba zayo
Kwinguqulelo entsha ebonisiweyo, kwenziwa utshintsho endaweni ye-Irrlicht injini yelayibrari ye-SDL2 esetyenziselwa indalo ...
Ukurhawuzelela, isicelo seliqonga labadali bedijithali abazimeleyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Itch kunye nokusetyenziswa kwayo kwidesktop. Eli liqonga labadali bedijithali abazimeleyo.
I-Warzone 3.4 inguqulelo 2100 sele ikhutshiwe kwaye ezi zezona nguqu ziphambili
Emva kweenyanga ezili-10 zophuhliso, ukukhutshwa kwenguqulelo engu-3.4.0 yomdlalo weqhinga-lokwenene lamaxesha "iWarzone 2100" yabhengezwa ...
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani iFooBillard-plus ku-Ubuntu. Ngumdlalo webhiliyadi onomtsalane we-3D.
Spelunky Classic HD, fakela lomdlalo weqonga nge-snap
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSpelunky Classic HD. Ngumdlalo weqonga wevidiyo esinokuyifaka sisebenzisa i-snap.
Cube 2 Sauerbraten, ufakelo ku-Ubuntu ngeFlatpak
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiCube 2 Sauerbraten. Eli yinxalenye yesibini yomdlalo odumileyo weCube FPS okhoyo njengeFlatpak.
Ikhuphe ingxelo entsha yenjini yomdlalo uGodot 3.2 ngezi zinto zintsha
Injini yasimahla yeGodot 3.2 ikhutshiwe, efanelekile ekwenzeni imidlalo ye-2D kunye ne-3D. Injini ixhasa ulwimi ...
Idabi lomlo V kwiLinux liyabanqabela kwaye libanqamle abadlali, ngokwe "ukukopela"
Kwiintsuku ezininzi ngoku, abadlali abaninzi beMidlalo edumileyo yeVarfield V abaqhuba esi sihloko kusasazo lweLinux baxele ukuba ...
Inguqulelo entsha yeSuperTuxKart 1.1 ifika kwaye ezi ziindaba zayo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yomdlalo ovulekileyo wokubaleka womdlalo wokudlala uSuperTuxKart 1.1 wabhengezwa, esele ...
I-OpenClonk, umdlalo wesenzo samahhala se-2D Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-OpenClonk. Ngumdlalo wamahhala, ophindaphindiweyo wesenzo se-2D.
FreedroidRPG, faka le RPG isekwe kwiParadroid
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-FreedroidRPG. Yi RPG esekwe kwiParadroid yakudala.
Ubomi bu-Strange 2 ngoku buyafumaneka kwiLinux kunye neMacOS enkosi kwiFeral Interactive
I-Feral Interactive iyenzile kwakhona: Ubomi obubekekileyo buyinto engaqhelekanga 2 ukuba ifumaneke kwi-macOS kunye neLinux kumaqonga anjengeSteam.
Umdlalo odumileyo ovulekileyo ongumdlalo we-Mario ufika kwinguqulelo yawo entsha yeSuperTux 0.6.1
Abaphuhlisi abaphethe iprojekthi yomdlalo odumileyo "SuperTux" bonwabile ukubhengeza ukumiselwa ...
I-Oolite, indawo yokulwa yendawo ye-3D kunye nesimulator yorhwebo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Oolite. Ukulwa kwendawo ye-3D kunye ne-simulator yezorhwebo Ubuntu.
Iplanethi iBlupi, isicwangciso esiliqili kunye nomdlalo we-adventure Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPlanethi yeBlupi. Isicwangciso esiliqili kunye nomdlalo we-adventure okhoyo njenge -AppImage.
I-Steam ngoku iya kuqhuba imidlalo kwizikhongozeli ezizimeleyo kwaye ikwazise ingxelo entsha yeProton 4.11-8
Ekuqaleni kwale veki, ivalve ikhuphe iindaba ezimbini ezinkulu, enye yazo kukukhutshwa kwenguqulelo entsha yeprojekthi yayo ...
I-BZFlag, iimfazwe ezininzi ze-3D zamatanki e-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-BZFlag. Umdlalo wabadlali abaninzi onokuba nawo kwiimfazwe zeetanki kwi-3D.
IiHedgewars, umdlalo ovulekileyo osekwe ekujuleni osisiseko
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiiHedgewars. Umdlalo weqhinga lokuzonwabisa wabadlali abaninzi kunye neehedgehogs njengabadlali abaphambili.
I-AstroMenace, umdlalo wasimahla we-3D wesithuba sokudubula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-AstroMenace. I-3D space shooter ye-Ubuntu yethu.
Kwinqaku elilandelayo siza kuqwalasela uYorg. Ngumdlalo wokubaleka wesitayile seMicro Machines oya kuvuyisa abasebenzisi.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iWarzone 2100. Umdlalo wesicwangciso-qhinga sokwenene simahla soBuntu.
URoberta, iprojekthi entsha yokudlala neScummVM ngokwendalo kwiSteam
Namhlanje siza kuthetha ngoRoberta, eyiprojekthi entsha ejolise ekwandiseni ukusebenza komxhasi weSteam ...
Kukhutshwa uhlobo olutsha lweProton 4.11-3 kunye neProton-i iprojekthi exhasa iwayini
UJuuso Alasuutari, ingcali kuphuhliso lweenkqubo zokumanyelwa kweaudiyo yeLinux (umbhali jackdbus kunye neLASH), ...
I-Jumpaï, umdlalo weqonga wokuyila nowahlukileyo wevidiyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iJumpaï. Ngumdlalo weqonga weqonga wevidiyo owahlukileyo kwabanye.
I-Ninslash, umdlalo weqonga we-2D omnandi kunye okhawulezayo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNinslash. Ngumdlalo okhawulezayo, ovulekileyo, umdlalo ophindaphindiweyo we-2D.
I-RetroArch, i-emulator edumileyo iya kufika kwi-Steam ngoJulayi 30
I-RetroArch emulator edumileyo iya kufika kwi-Steam ngoJulayi 30 kwaye iya kusivumela ukuba sidlale ezakudala kuso nasiphi na isixhobo esifanelekileyo.
I-Stunt Rally umdlalo wokubaleka wesitayile se-rally
I-Stunt Rally ngumdlalo omnandi wokubaleka we-rally ngezinto ezinento yokuhamba (njengokutsiba, iiluphu, iirampu kunye nemibhobho) ...
Ukubhalwa kwakhona kweToontown, kuyafumaneka ukuyifaka njenge-snap kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga iToonTown ibhalwe kwakhona, umdlalo wosapho lonke esinokulufaka ngephakheji yayo kwi-Ubuntu.
UGoogle Stadia ubhengezwe ngokusesikweni kwaye zonke iinkcukacha sele zisaziwa
Ngo-Matshi, uGoogle wabhengeza uGoogle Stadia, iqonga lomdlalo wevidiyo esinokudlala kuwo naphina ...
Imodeli emnyama, isela lomdlalo wobusela Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga imodeli emnyama. Umdlalo womntu wokuqala malunga nesela lesimbo sobusela.
I-Freedoom, dlala iDoom yeklasi ngendlela eyahlukileyo
IFreedoom ngumdlalo owenzelwe abo badlala iDoom kumashumi eminyaka eyadlulayo. Ukuba ungomnye wabo, awungekhe uyiphose.
I-midnightmare Teddy, umdlalo wokudubula uyafumaneka kwi-flathub
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iMidnightmare Teddy. Lo ngumdlalo wokudubula ofumanekayo kwi-flathub.
Horizons ezingaziwayo umdlalo weqhinga olusekwe kwiAnno 1602
IiHorizons ezingaziwayo ngumthombo ovulekileyo weqhinga lokwakha ixesha lekholoni kunye nomdlalo wokulinganisa kwezoqoqosho, ngokusekwe kumdlalo ...
I-Widelands umdlalo wexesha-lokwenyani elifana nabahlali
I-Widelands ngumdlalo weqhinga lokwenene-lamaxesha (kuthungelwano lwabadlali abaninzi okanye kumdlali omnye) oko kukuthi…
Emva konyaka onesiqingatha sophuhliso, ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yeSupertuxkart 1.0 kuye kwavezwa, okuza neziphuculo ezininzi kwi ...
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kweSuperTuxKart kuyeza kwaye sele sele sinayo inguqulelo yokuqala yoKhululwa kwabaSebenzi bale Super Mario Kart.
Inguqulelo entsha iyaphawuleka ngokuhlaziya ikhowudi esisiseko yewayini 4.2. Xa kuthelekiswa nesebe langaphambili elisekwe kwiWine 3.16, ubungakanani ...
NgoLwesine, nge-28 kaMatshi, umdlalo wemoto we-DiRT 4 uya kufumaneka kwiLinux nakwi-macOS. Bopha iibhanti zakho eziza kumagophe!
I-Stadia kaGoogle ayikholosi kwaye ezi zizizathu
Isindululo esikhulu sikaGoogle semidlalo yevidiyo, iStadia ayigqibi ukukholisa uluntu lokudlala. Sikuxelela izizathu.
IGoogle ityhilwe kwi-GDC, eStadia, ngenkonzo yayo yokudlala ilifu
Ngoku siyazi ukuba ikamva likaGoogle liphethe ntoni kwimidlalo yevidiyo. Emva kokonwabisa ukunqunyanyiswa kangangeentsuku, uGoogle wazisa iStadia, yayo ...
Ibali lomqolomba, umdlalo weqonga wabalandeli beklasikhi
Kule posi siza kuthetha ngeNdaba yoMqolomba, umdlalo weqonga oqhelekileyo oya kuvuyisa bonke abo bayaziyo i-MSDOS.
Inguqulelo entsha yeProton 3.16-8 sele ikhutshiwe kwaye ifika nge-DXVK 1.0
IProton eqhuba kwiStam kutshanje ihlaziyiwe ukuphucula kakhulu amava emidlalo kubasebenzisi be…
I-Basingstoke ngoku isimahla kwiLinux; kungekudala yonke imidlalo yePuppygames
I-Basingstoke iba simahla kwiLinux, kodwa ayisiyiyo kuphela iindaba ezilungileyo ezivela kwiPuppygames: Yonke imidlalo yabo iya kukhululeka kungekudala!
Ukufakwa kwe-Mari0 (Mario + Portal) ku-Ubuntu usebenzisa iphakheji ye-snap
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani iMari0 ngephakheji ye-snap. Umdlalo ophinda ubuyisele i-Super Mario Bros yoqobo edityaniswe nePortal.
Kukhutshwa uhlobo olutsha lweMinetest 5.0.0, indawo evulekileyo yeMineCraft
I-Minecraft yenye yezona midlalo zidumileyo ze-geek kumaxesha akutshanje. Kumntu ongazange ave ...
Uloyiko lwedolophu, umdlalo wabadlali abaninzi kwi-intanethi
Kule nqaku siza kujonga i-Urban Terror, i-shooter yabadlali abaninzi esinokuyifaka kwi-Ubuntu usebenzisa ipakethe ye-snap.
Isibhakabhaka esingapheliyo-Umdlalo wokulwa nokuKhangela indawo
Isibhakabhaka esingapheliyo yindawo yokurhweba yendawo ye-2D kunye nomdlalo wokulwa ophefumlelweyo ngothotho lwe-Escape Velocity yakudala. Uqala njengokapteni wenqanawa encinci ...
I-GameHub ilayibrari yomdlalo emanyanisiweyo ekuvumela ukuba ujonge, ufake, ubaleke kwaye ususe imidlalo ixhasa imidlalo yemveli kunye non-yemveli kwimithombo eyahlukeneyo.
I-Trigger Rally, umdlalo obalaseleyo we-HTML5 wokubaleka
Namhlanje siza kuthetha ngomdlalo ogqwesileyo wokubaleka endiqinisekile ukuba ngaphezulu kwesinye siya kuthanda iTrigger Rally ngumdlalo wokubaleka
Amazwe angunaphakade, i-MMORPG ye-multiplatform ene-android version
Amazwe angunaphakade ngumdlalo wasimahla wabadlali abaninzi kwi-Intanethi (iMMORPG), umdlalo wasimahla we-3D wabadlali abaninzi. Iqonga lihlabathi eliyiphupha
Phila ngokukhawuleza, umdlalo wokubaleka ofumaneka nge-Snap
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka i-Live yejubane lokubaleka umdlalo ngephakheji yayo kwi-Ubuntu.
ISuperTuxKart ngumdlalo owaziwayo we-3D Arcade racing game kwiLinux eyilelwe iinkqubo ezisekwe kwi-Linux.
I-Ppsspp -Umthombo oBalaseleyo woMnqamlezo ovulekileyo we-PSP Emulator
Njengoko isihloko senqaku lisitsho, namhlanje siza kuthetha kancinci malunga ne-Ppsspp engumthombo ovulekileyo we-PSP, enelayisensi ...
Amaphupha akhawulezayo, umdlalo wokubaleka ofumaneka kwiFlathub
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiiPhupha eziKhawulezayo. Lo ngumdlalo we-3D womdyarho esiya kuwufumana ufumaneka kwiFlathub
I-Red Eclipse umdlalo obalaseleyo wasimahla woBuntu
I-Eclipse ebomvu yiFPS yasimahla yomdlali kunye nabadlali abaninzi (umntu wokuqala wokudubula) kaLee Salzman kunye noQuinton Reeves wePC, lo mdlalo uphambili
Uyifaka njani i-Xbox 360 isilawuli ku-Ubuntu nakwiziphumo?
I-Xboxdrv inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokumisela: ikuvumela ukuba ulinganise imicimbi yekhibhodi kunye nemouse, amaqhosha okubuyisa, nokwenza ...
Iifayile ze-Retro-emulators kunye nemidlalo kwi-Ubuntu yethu usebenzisa iiphakheji ze-snap
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ii-emulators zesitayile se-retro kunye nemidlalo enokufakwa kusetyenziswa iiphakheji ze-snap.
Faka i-emulator ye-PS1-Reloaded kwi-Ubuntu
I-PCSX-iphinda ilayishwe kwakhona yindawo yokudlala ye-PlayStation 1 esinokuyonwabela ngayo imidlalo yethu kwikhompyutha yethu. Ayifani nabanye ...
Uluhlu lwemidlalo yesiphelo se-Ubuntu onokuyifaka ngokulula kwaye onokuyonwabela ngayo iklasikhi eyonwabisayo.
I-OpenTomb, iTomb Raider yasimahla Ubuntu bethu
Abaphuhlisi abaliqela benze inguqulelo yasimahla yomdlalo wevidiyo odumileyo iTomb Raider. Lo mdlalo wevidiyo ubizwa ngokuba yi-OpenTomb kwaye sinokuwudlala ngoku ...
Imidlalo yeGNOME ngoku ilungile kwaye iyafumaneka ku-Ubuntu 17.04
Besingalindelanga okungaphantsi: Imidlalo ye-GNOME ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokufakwa kwe-Ubuntu 17.04 Zesty Zapus. Ukudlala!
I-PPSSPP 1.4 ngoku iyafumaneka, ibandakanya inkxaso yeDirect3D 11
I-emulator eyaziwayo kakhulu kwi-Sony PSP ihlaziyiwe. I-PPSSPP 1.4 iza neendaba ezinomdla, ezinje ngenkxaso yeDirect3D 11
Ukuba ungumsebenzisi weLinux, uyayithanda imidlalo kwaye ayisiyongumnini, nolu uluhlu lweyona midlalo ilungileyo evulekileyo ekhoyo kwiLinux.
Umdlalo we-0 AD uhlaziywa ngophuculo oluninzi
Umdlalo weqonga le-0 AD uhlaziywa kubandakanya neqela elitsha, i-Selucids, nazo zonke iiyunithi kunye neendlela ezahlukeneyo zomdlalo.
ITomb Raider ekugqibeleni iza ku-Ubuntu
Usuku lufikile: iTomb Raider ikhutshelwe iinkqubo ezininzi zokusebenza, kwaye okona kubaluleke kakhulu, iyafumaneka ku-Ubuntu.
Ukuphuculwa kwe-0 AD ukuya kwiAlfa 20 iTimosthenes yokongeza iimephu ezili-10
Emva kweenyanga ezi-4 zophuhliso, iqhinga lexesha lokwenyani (i-RTS) yomdlalo we-0 AD ihlaziyiwe kuhlobo lwe-Alpha 20,
Ukuba udlale oomatshini be-arcade ukusuka esiphelweni senkulungwane ephelileyo, ngokuqinisekileyo uyazi iMAME. Sichaza indlela yokufaka i-emulator ku-Ubuntu.
Lingisa imidlalo yePlaystation 2 ngenguqulelo entsha yePCSX2
Sibonisa iimpawu zenguqulo entsha ye-PCSX2, i-emulator ye-Playstation 2. Ukongeza, sibonisa ukuba ingafakwa njani ku-Ubuntu.
Imidlalo emihlanu ekufuneka sinayo kwi-Ubuntu yethu
Sinika isikhokelo esincinci kunye nemidlalo emihlanu efanelekileyo ekufuneka sinayo kwi-Ubuntu yethu, ngokweendidi zazo.
Uyifaka njani kwaye uyidlala njani iSuperTux kwi-Ubuntu PC yethu
Ngaba uyayithanda imidlalo yeqonga? Ewe, iSuperTux yintsomi kaMario Bros ongaphoswa yiyo.
IWarsow ifikelela kuguqulelo lwe-2.0 ngeendaba ezibalulekileyo
Inguqulelo yeWarsow 2.0 ikhutshiwe, i-FPS (umntu wokuqala wokudubula) efumaneka kwii-PC zethu zoBuntu.
Ukudlala simahla i-0 AD ifika kwiAlfa 19 Syllepsis Version
Isicwangciso-qhinga somdlalo wexesha-lokwenene i-0 AD ifikelela kuhlobo lwayo lweAlfa 19 iSyllepsis kwaye ngoku iyafumaneka kwiWindows, Mac nakwiLinux.
DeSmuME, dlala iNintendo DS kwiPC yakho ngeBuntu
Ngaba ungathanda ukudlala iNintendo DS kwiPC yakho kunye noBuntu? Kwenzekile ixesha elide enkosi kwi-emulator ye-DeSmuME
Dlala umdlalo wechess ku-Ubuntu
Incwadana encinci yeyiphi iinkqubo oza kuyisebenzisa ukudlala umdlalo wechess kwi-Ubuntu yethu yasimahla kwaye ilungile kwiinguqulelo ezihlawulelweyo.
Alien: Ukuzahlulwa kweLinux kulibazisekile ngomhla wokukhutshwa
Alien: Ukuzahlulwa kweLinux ngekhe kuphume xa kulindelwe. Kubonakala ngathi ingxaki nge-AMD ngunobangela wokulibaziseka ekufikeni komdlalo kwiLinux.
Iindlela ezi-3 ezinomdla zokufumana iMinecraft ye-Ubuntu
IMinecraft yenye yezona midlalo zidumileyo kumaxesha akutshanje. Nangona kunjalo, ihlawulwe. Sikunika iindlela ezintathu zasimahla zeMinecraft.
I-PlayDeb, indawo yokugcina eyenzelwe ukudlala ku-Ubuntu
Uyifaka njani iPlayDeb, indawo yokugcina enemidlalo emininzi kunye nokusetyenziswa okunxulumene noko okungafakwanga kwiindawo zokugcina ezisemthethweni.
Uyifaka njani iWorld Warcraft kwi-Ubuntu bethu
Ngonyaka omtsha wesikolo, uninzi lwethu luxhalabile kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokucinezeleka kunokudlala iWorld Warcraft kwi-Ubuntu yethu ngokuzolileyo.
ISuper City, umdlalo owenziwe ngeKrita, Blender kunye neGIMP
ISixeko iSuper ligama lomdlalo wevidiyo owenziwe ngezixhobo ezithandwa kakhulu kwihlabathi lesoftware yasimahla: iKrita, iBlender kunye neGIMP.
Ekugqibeleni iValve yazisa iSteamOS, inkqubo yokusebenza esekwe kwiLinux ejolise ekuvuseleleni ishishini lokudlala lePC kwigumbi lokuhlala.
Andinguye umdlali weqonga nangayiphi na indlela, nditsho nomdlalo we-solitaire, kodwa eli nqaku livele kwi-Inquirer IS ...